Archive du 20170310
Takaitran'i Enawo Voa mafy Antananarivo
Ny rivodoza � Enawo � no lasa fa ny takaitra navelany sy ny fiantraikany mbola mitohy ho an�ny mponin�Antananarivo manokana, indrindra eny amin�ny faritra iva manamorona ny reniranon�Ikopa sy Sisaony ary Imamba.
Tsy nahitana rano niandrona mihitsy ny araben�Andoharanofotsy ny Alarobia sy omaly tontolo andro na dia nirotsaka tsy ato aza ny orana teto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Inona ary ity !
Miarahaba Jean a ! Tena henjana letsy ilay mahazo antsika a ! Ny mahazo anay moa indrindra e ! Ny olana anefa tsy voavaha kanefa dia vesarin�ity loza tsy fanao ianao ity indray.
Tandindomin-doza Antananarivo Miakatra Ikopa sy Sisaony
Omaly tamin�ny 11 ora sy sasany antoandro dia vaky ny fefiloha manamorona ny reniranon�i Sisaony,
Vahoakan�Antsakabary Tra-doza fanintelony
Anisan�ny nizaka mangidy ny mponin�Antsakabary tamin�ity taona ity. Loza telo nisesy izao no nahazo azy ireo.
Nijery manokana ireo tra-boina eto Antananarivo ny ben�ny tan�na Lalao Ravalomanana omaly, amin�ny maha tompon�andraikitra voalohany azy eto an-drenivohitra.
Fandraisan�andraikitry ny vehivavy Mila hatsaraina hatrany, hoy ny depiote Horace
Lohahevitra nanamarihan�ny Fiadidiana ny tan�nan�Antananarivo renivohitra ny andron�ny vehivavy ny 8 marsa 2017 teo ny hoe �Vehivavy kristianina, antoky ny fampandrosoana�.
Krizin�ny rivo-doza Miditra an-tsehatra ny Firenena mikambana
Mitsidika sy mitsirika ny tapany avaratra sy avaratra atsinanan�ny nosy amin�izao fotoana ny solontenan�ny sampandraharahan�ny firenena mikambana tarihan-dRamatoa Violette Kakyomya ka ahitana ny PAM sy ny UNICEF.
Fokontany Amboditsiry Voasoroka ny tondra-drano, vitsy ireo traboina
Nihena tsy toy ny isan-taona ny tondra-drano teny amin�ny fokontanin�Amboditsiry taorian�ny fandalovan�ny rivo-doza � Enowa�.
Miasa mafy ny "Pompiers" Trano miisa 17 tsy maintsy nazera, hazo 13 nokapaika
Niasa mafy ny sampandraharahan�ny mpamonjy voina etsy Tsaralalana nanomboka afaka omaly alarobia hatramin�ny omaly alakamisy nandritra ny fandalovan�ny rivo-doza Enawo teto amintsika.
Anatin�ny vanim-potoana maha tra-pahasahiranana ny ankamaroan�ny mponina tahaka izao, mialoha ny nitrangan�ny loza no hisian�ny asa be dia be tsy arahana sehoseho sy kabary isak�izay mihetsika satria efa vonjy aina.
Vidim-piainana Tsy mandray andraikitra ny mpitondra
Miaina vanim-potoana sarotra ny vahoaka Malagasy amin�izao fotoana. Saika ny 80%-n�ny faritra eto Madagasikara no nizaka ny voka-dratsin�ny rivodoza.
VEHIVAVY MIZAKA TENA ARA-TOEKARENA Lasan�ny �Ampela Miray Asa� ny amboara
Lasan�ny fikambanam-behivavy �Ampela Miray Asa�, iray tamin�ireo 578 nandray anjara ny amboara tamin�ilay fifaninanana tetikasa �vehivavy mizaka tena ara-toekarena� nokarakarain�ny minisiteran�ny Mponina.